merolagani - टी प्लस टु मा राफसाफ गर्न सबै सरोकारवाला तयार,सिडिएससीेले कहिले साइत जुराउला ?
टी प्लस टु मा राफसाफ गर्न सबै सरोकारवाला तयार,सिडिएससीेले कहिले साइत जुराउला ?
Sep 15, 2020 02:50 PM Merolagani
शेयरको कारोबारको राफसाफ चक्र घटाउन सबै सरोकारवाला तयार भएका छन्। केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससि),नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसन र लगानीकर्ता संघ तयार भएका हुन्। केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीले राफसाफ चक्रलाई दुई दिनमा झार्ने गरी काम सिध्याएकाे छ।
सरोकारवालासँग छलफल गरेर टी प्लस टु मा लैजाने अन्तिम तयारीमा सिडिएससि छ।
"हाम्रो तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै काम लगभग सकेका छौ । लागु गर्नु पूर्व सरोकारवालाहरुको राय बुझ्न मात्रै वाँकी छ। उहाँहरूसँगको छलफल पछि हामी लागु गर्ने तयारीमा छौ" सिडिएससिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण प्रसाद आचार्यले मेरो लगानीसँग भने।
यता नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसन समेत टी प्लस टु मा जान तयार देखिएको छ। उसको तर्फबाट टी प्लस टु मा जान कुनै अवरोध नहुने एसोसिएसनको भनाइ छ। "हाम्रो तर्फ बाट कुनै अवरोध छैन। एसोसिएसन टी प्लस टु मा जान तयार छ"नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने। उनका अनुसार आज ब्रोकर कम्पनीहरूले शेयर कारोबारको मध्यस्थता गर्ने मात्रै हो। कारोबार गर्ने र भुक्तानी गर्ने जिम्मा इन्भेष्टरको हो। उनीहरूले पर्सिपल्ट रकम बुझाउने गरेकोमा अब भोलिपल्टै बुझाउनु पर्छ। उनीहरूले भुक्तानी गरेको रकम हामीले बुझाउने मात्रै हो। हामीले समयमा पैसा पाउनु पर्छ। समयमै शेयर ट्रान्सफर हुनु पर्छ। त्यसमा ब्रोकर कम्पनीलाई कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन ।
यसका लागि इन्भेष्टरहरू पनि तयार हुनु पर्ने देखिन्छ। किनकि उनीहरूले पैसा तिर्न यति बेला एक दिन बढी समय पाउँदै आएका छन् । टी प्लस टु लागु भएपछि उनीहरूलाई कम समय हुन्छ। उनीहरूले शेयर खरिद गरेको भोलिपल्टै चेक,नगद वा रकम ट्रान्सफर गर्नु पर्ने रानाभाटको भनाई छ।
ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी समेत टी प्लस टु मा जान तयार बताउँछन। "शेयर बजारको विकास गर्ने काममा हाम्रो कुनै अवरोध हुँदैन। विकासका लागि जे गर्नु पर्छ हामी त्यो सबै गर्दै जान्छौ। बजारको डेभलपमेन्टको हरेक मुभमेन्टलाई हामी पोजेटिभ लिन्छौ। त्यसलाई सपोर्ट पनि गर्छौ। उसले भनेका दिनबाट हामी त्यसलाई इम्पिलिमेन्ट गर्छौ "रेग्मीले भने।
यसैगरी लगानीकर्ताहरूको समूह समेत टी प्लस टु मा जान हतारिएको छ। टी प्लस टु मा जान लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट कुनै समस्या नहुने उनीहरू बताउँछन्। "लगानीकर्ताहरू टी प्लस टु मा जान तयार छन्। लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट यसलाई स्वागत हुने छ"शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले मेरो लगानीसँग भने।
यस अघि नै टी प्लस वान मा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। यति बेला टी प्लस टुमा लानु हुन्न भन्न लगानीकर्तालाई नैतिकताले समेत नदिने अर्यालको भनाइ छ। शेयर बजार विश्व स्तरको हुनु पर्छ भनेर लगानीकर्ताले भन्दै आएको हो। त्यसले कारोबारको भोल्युम समेत बढ्छ। यति बेला थप एक दिन उधारो पाइएको हो। आखिर पैसा त तिर्नै पर्छ। थप एक दिनको उधारोको लागि कुनै पनि लगानीकर्ताले टी प्लस टु मा जानु हुँदैन भन्दै नभन्ने अर्यालको भनाइ छ।
हाल दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच भएपछि टी प्लस थ्री मा कारोबार राफसाफ हुँदै आएको छ। कारोबार भएको दिनलाई टी प्लस जिरो भनिन्छ भने कारोबार भएको दोस्रो दिनलाई टी प्लस वान भनिन्छ। तेस्रो दिन टु र चौथो दिनलाई थ्री भनिन्छ। यति बेला शेयर बिक्री भएको चौथो दिनमा लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीबाट पैसा पाउँछन्। शेयर खरिदकर्ताले भने तेस्रो दिन भुक्तानी गर्नु पर्छ। टी प्लस टु भएपछि बिक्रीकर्ताले तेस्रो दिन रकम पाउँछ भने खरिद कर्ताले दोस्रो दिन नै भुक्तानी गर्नु पर्छ।